धर्म संस्कृती Archives - Page 92 of 109 - Purbeli News
सपनामा सम्भोग गरेको देखेमा के हुन्छ ? जानी राखौं
विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार अधिकांश युवायुवतिहरु यस्तो सपना देख्न चाहन्छन् जहाँ उनीहरुको आफ्नो प्रियजनसँग भेट होस् र यौनक्रिडा गर्न पाइयोस् । त्यसैले सपनामा कोहीसँग सम्भोग गरेको देख्नुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । तर यौनविज्ञहरुले भने सपनामा सम्भोगको सम्बन्ध व्यक्तिको अरुसँगको यौन सम्बन्ध र उसको मनोविज्ञानमा निर्भर हुने बताएका छन् । कुनै महिलाले सप...
हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । त्यस्ता चाहनाहरु समय–समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर श्रीमती पाउनु । तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस् । यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ । अर्थात राशिअनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तुला राशि स...
अागामी बर्ष २०७५ काे पात्राे : कात्तिकमा दशैंतिहार : मंसिरमा एउटा मात्रै बिवाहकाे लगन
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विसं २०७५ का लागि १३ वटा पात्रो ( पञ्चाङ्ग )लार्इ प्रकासनकाे अनुमती दिएकाे छ । अनुमति पाएका पञ्चाङ मध्ये एक ‘सूर्य पञ्चाङ्ग’का अनुसार नयाँ वर्षकाे पात्राेमा धेरै कुरा फरक भएकाे बताइएकाे छ । उक्त पात्राेमा कार्तिकमै दशै तिहार परेकाे छ भने बिवाहकाे लगन थाेरै रहेकाे पाइएकाे छ । आगामी वर्ष विवाहका लागि कुल ३४ वटा साइ...
सन्दर्भ प्रणय दिवस : तपाईंका लागि कुन राशि संग प्रेम सम्बन्ध कस्ताे ?
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्, यद्यपि त्यो आकर्षण प्रेमका कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आकर्षणको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ...
काठमाडौँ, २२ माघ / नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विसं २०७५ का लागि १३ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई प्रकाशनको स्वीकृति दिएको छ । समितिले स्वीकृति दिएका पञ्चाङ्गमा तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाशदर्शन, बंगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति र सिद्धि रहेको अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । यी सबै पञ्चाङ्ग...
जगद्गुरु बालसन्त भन्छन – जबसम्म गाइकाे ब्यवस्थापन हुदैन तब सम्म अन्न ग्रहण गर्दिन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका स्थानीय बासिन्दाले गाई लगेर सडक र बजार क्षेत्रमा बेवारिसे रुपमा छाडने क्रम बढेपछि जगद्गुरु बालसन्त मोहनशरण देवाचार्य महाराजले अन्न ग्रहण नगर्ने प्रण गर्नु भएको छ । घरपालुवा गाई सडकमा छाडिएपछि उहाँले कठोर निर्णय लिनुभएको हो । उहाँले सडकमा गाई छाडिएपछि अन्न ग्रहण गर्न छाड्नु भएको छ । देशव्यापी भ्रमण पूरा गरी फर्किएका जगद्तगुरुल...
राशी अनुसार यौन चाहना , तपाइको कस्तो ?
हरेक मानिसको स्वभाव र रुची फरक फरक हुन्छ । मानिसले आफ्नो रुची अनुसार व्यवहार पनि भिन्न खालको देखाइरहेको हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कुनै व्यक्ति गुलियोको पारखी हुन्छन् भने कोही अमिलो वा नुनिलोको । मानिसलाई स्वस्थ रहन यौन जीवनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानसिक र शारिरीक रुपमा स्वस्थ रहन पनि यौन जीवन आवश्यक हुने मनोपरामर्शदाता...
हिँड्दा हिड्दै सिक्का भेटियो ? दिन्छ यस्तो कुराको संकेत
एजेन्सी। कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन् । ज्योतिषशास्त्रले भने बाटोमा भेटिएको पैसाको कारण र संकेत बताएको छ । त्यसोभए बाटोमा पैसा भेटिए के हुनसक्छ त त्यसको मतलब ? ज्योतिषका अनुसार सडक वा बाटोमा पैसा भेटियो भने यसको अर्थ तपाई निकै नै महत्वपूर्ण हुनुह...
बुधबारको ग्रहण निकै खतरनाकः प्रतिष्ठित व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ
काठमाडौँ / बुधबारको चन्द्रग्रहण खतरानाक निकै हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ ।ज्योतिषशास्त्रीहरुका अनुसार, बुधबारको खग्रास चन्द्रग्रहणले देशमा अस्थिरता ल्याउने, विदेशी दबाब बढ्न सक्ने र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समेत मृत्यु हुन सक्ने देखाएको छ । चर्चित ज्योतिषशास्त्री डा सुनिल सिटौलाले दैनिक नेपाललाई भने, बुधबार साँझ काठमाडौँमा ६ बजेर २६ मिनेटमा ग्र...
कहिल्यै क्षमा नमिल्ने र जीवनभर सुख प्राप्ति नहुने यी १२ पाप
सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउ‘दैनन् । मन्दिरमा गएर निर्जीव मूर्तिलाई फूलपाती अक्षता भेटी चढाई ढोग दिनुलाई धर्म भन्छन् भने मन्दिरमा पूजा नगर्नुलाई पाप भन्छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैले धेरै थोरै पाप गरेकै छन् कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि त कसैले अन्जानमा । शिव पुराणमा कार्य, व्यवहार...